चैतुको ओढ्ने (लघु कथा) – Chitwan Post
चुनाव नजिकिँदै गर्दा गाउँमा भोट माग्नेको लर्को लाग्यो । प्रत्येक पार्टीले सडकका पोलमा झन्डा झुन्ड्याए, तुल टाँगे, भित्तो रङ्गाए । बाटोघाटो र सडकपेटी पार्टीको झन्डा र तुलले दुलही सिँगारेझैँ सिँगारियो ।
नुनतेल लिन बजार गएको चैतु झाँगडलाई अरु बेलाको भन्दा यो दृश्य निकै रमाइलो र नौलो लाग्यो । उसले प्रत्येक पोलमा झुन्ड्याइएको झन्डालाई नियालेर हे¥यो । विभिन्न चिन्ह अंकित बेग्लाबेग्लै रङका ती झन्डा देखेर ऊ छक्क प¥यो !
‘हैन, पोल हुँदी यसरी किन झन्डा राखिएको होला ? हेर, कपडाको सत्यानास ! यसरी झुन्ड्याउने कपडा मलाई दिएको भए यो हिउँदको जाडामा ओढ्ने पो बनाउने थिएँ । बुद्धि नभएकाहरु’– उसले पोलतिर हेरेर भन्यो ।
बेलुका खाना खाएर सुत्नलाई परालमाथि लुंगी ओछ्यायो । अरु बेला भए उसलाई त्यही परालमा मस्तसँग निद्रा लाग्थ्यो, तर आज पटक्कै लागेन । उसले उठेर बत्ती बाल्यो । उसकी छोरी र श्रीमती एउटै खास्टो तानातान गर्दै निदाउने प्रयास गर्दै थिए ।
‘कति चाँडो जाडो बढेछ । भोलिदेखि घुर नतापी भएन’– उसले मनमनै सोच्यो ।
उसलाई दिउँसो बजार जाँदा बाटाका पोलमा टाँगेका झन्डा र तुलको सम्झना आयो । ‘ओहो ! ती पोलमा टाँगिएका झन्डालाई जम्मा पारेर ओढ्ने, ओछ्याउने बनाउन पाए त !’ उसले न्यानोपनको महसुस ग¥यो ।
‘बरू, अहिले नै गएर ती झन्डा झिकेर ल्याउनुपर्ला । राति छ, कसैले थाहा पनि पाउँदैनन् क्यारे ! यसरी रातभरि जाडाले सिउसिउ गरेर बस्नुभन्दा त तातामा सुत्न कस्तो मज्जा हुन्थ्यो होला । आखिर यहाँ आएर ओढ्ने, ओछ्याउने कसले हेर्ला र ! ‘जा चैतु जा’– उसको मनले यसै भन्यो ।
ऊ बत्ती निभाएर सरक्क बाहिर निस्क्यो । निष्पट्ट अँध्यारो रातमा सडकपेटीका पोलमा चढ्दै झन्डा झिक्दै गर्न थाल्यो । खाँदीखाँदी झोला भरेर घर फक्र्यो । स्वास्नीलाई उठायो । सबै झन्डालाई जोडेर टाटेपाटे भए पनि ओढ्ने बनाए दुवैले ।
भोलिपल्ट बाटाका पोलहरुमा झन्डा र तुल नदेख्दा मानिसहरुले लख काटे– ‘नगरपालिकाले झन्डाहरु उठाएछ क्यार’ ! चैतु झाँगड भने झन्डा र तुलको ओढ्ने ओढेर मस्त निदाइरहेको थियो ।